Dowladda oo howlgal ku dishay Xubno ka tirsan Al-Shabaab. - Awdinle Online
Dowladda oo howlgal ku dishay Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Howlgalka oo u horkacayo Taliye Qeyb 27aad ee Militirga Soomaaliya General Axmed Maxamed Tareedisho ayey Ciidamada Dowladda ka Sameeyan Degaan u dhaxeyo Raagaceele iyo Magaalada Jowhar ee Dowlad Goboleedka Hir-shabeelle waxaan Sida ay Saraakiisha Militirga Sheegen Howgalkan intu Socoday Dagaalo aay La galeen Al-Shabaab ay ku dilen tiro kamid ah Dagaalyahanda Al-Shabaab.
Taliyaha qeybta 27aad Xooga dalka Gen-Tareedisha ayaa tilmaamay inay tira Maxaabiis ah ay kusoo qabteen Howgalka lana wareegeen Ciidamada Millateriga Degaan badan oo Hoostaga Degmada Raagaceele ee Gobolka Shabeelaha dhaxe.
Taliyaha qeybta 27aad Gen Axmed Maxamed Tareedisho ayaa Sheegay inay siiwadi doonaan Howglada ilaa Al-Shabaab ay ka saarayaan degaannada Guud ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Previous articleMareykanka oo kordhiyay cadaadiska uu saarayo hogaamiyaasha Soomaalida
Next articleMidowga Musharixiinta oo walwal iyo walaac muujiyay